Izindaba - Umehluko phakathi kwe-FWD, i-RWD, i-AWD ne-4WD
Kunezinhlobo ezine ezahlukene ze-drivetrain: front wheel drive (FWD), rear wheel drive (RWD), all-wheel-drive (AWD) neFour-wheel drive (4WD).Uma uthenga izinto ezishaqisayo nezishintshayo zemoto yakho, kubalulekile ukwazi ukuthi imoto yakho inayiphi isistimu yokushayela futhi uqinisekise ukulingana kwezinto ezibamba ukushaqeka noma ama-struts nomdayisi.Sizokwabelana ngolwazi oluncane ukuze sikusize uqonde.
I-Front-Wheel Drive (FWD)
Isondo langaphambili lisho ukuthi amandla enjini ahanjiswa emasondweni angaphambili.Nge-FWD, amasondo angaphambili ayadonsa kanti amasondo angemuva awawatholi amandla.
Imoto ye-FWD ​​ngokuvamile ithola ukonga uphethiloli okungcono, njengeVolkswagen GolfGTI,Isivumelwano seHonda, I-Mazda 3, I-Mercedes-benz A-classfuthiIHonda CivicUhlobo R.
I-Rear-Wheel Drive (RWD)
Ukudonsa ngamasondo angemuva kusho ukuthi amandla enjini ahanjiswa emasondweni angemuva wona aphushela imoto phambili.Nge-RWD, amasondo angaphambili awatholi amandla.
Izimoto ze-RWD zingakwazi ukuphatha amahhashi amaningi kanye nezisindo zezimoto eziphakeme, ngakho-ke zivame ukutholakala ezimotweni zezemidlalo, ama-sedan okusebenza kanye nezimoto zomjaho ezifanaI-Lexus IS, Ford Mustang , I-Chevrolet CamarofuthiBMW 3Uchungechunge.
(Ikhredithi yesithombe: quora.com)
I-All-Wheel Drive (AWD)
Idonsa ngawo wonke amasondo isebenzisa ingaphambili, ingemuva naphakathi nendawo ukuze inikeze amandla kuwo wonke amasondo emoto.I-AWD ivamise ukudideka ne-four-wheel drive kodwa kukhona umehluko omkhulu phakathi kwayo.Ngokuvamile, uhlelo lwe-AWD lusebenza njengemoto ye-RWD noma i-FWD- iningi liyi-FWD.
I-AWD ijwayele ukuhlotshaniswa nezimoto ezihamba emgwaqeni, njengama-sedans, izinqola, ama-crossovers, namanye ama-SUVs afanaI-Honda CR-V, Toyota RAV4, kanye ne-Mazda CX-3.
I-Four-Wheel Drive (4WD noma 4×4)
Ukushayela ngamasondo amane kusho ukuthi amandla enjini ahanjiswa kuwo wonke amasondo ama-4 - ngaso sonke isikhathi.Ivame ukutholakala kuma-SUV amakhulu namaloli afanaI-Jeep Wrangler, I-Mercedes-Benz G-Classkanye neToyota Land Cruiser, ngoba inikeza ukudonsa kahle uma ungekho emgwaqeni.
(ikhredithi yesithombe: ukuthi izinto zisebenza kanjani)
Isikhathi sokuthumela: Mar-25-2022
ICar Air Bags Ukumiswa Ukumiswa Komoya IAir Suspension Strut Qedela iStrut Assembly IChina Shock Absorbers Complete Struts